Ahoana ny fametrahana macOS Sierra amin'ny Mac | Avy amin'ny mac aho
Ahoana ny fametrahana macOS Sierra amin'ny Mac tsy manohana
Navoaka i Apple macOS Sierra Tamin'ny faran'ny volana lasa teo, ny kinova vaovao an'ny rafitra miasa eo amin'ny biraony izay tonga miaraka amin'ny vaovao mahaliana, toa an'i Siri na ny fahafaha-manao sary Picture-in-Picture mijery YouTube ao anaty varavarankely mitsingevana. Ny olana dia ny, toy ny mahazatra, Tim Cook sy ny orinasa dia tsy mamela afa-tsy kinova vaovao hapetraka amin'ny solosaina izay ahazoan'izy ireo antoka fa handeha tsara izany, Macs maro no tavela, izay raha ny teôria dia tsy tokony hanome olana lehibe. .
Ahoana raha irintsika hametraka Sierra avy hatrany ao amin'ny Mac tsy tohanana? Izahay, tsy afaka ... na tsia amin'ny fomba ofisialy. Raha ny tena izy, raha misy Hackintosh, ahoana no tsy hametrahana macOS amin'ny solosaina Apple? Raha azo atao. Amin'ity lahatsoratra ity dia hampianarinay anao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao, izay misy ireo olana izay mety sendra anay ankehitriny sy amin'ny ho avy.
1 Ampidiro ny macOS Sierra amin'ny Macs tsy misy mpanohana
1.1 fepetra takiana
1.2 Zavatra tokony ho ao an-tsaina
2 Ary ahoana no fanavaozana ny macOS Sierra amin'ny Mac tsy tohanan'ny tenako?
Ampidiro ny macOS Sierra amin'ny Macs tsy misy mpanohana
Kopian'ny mpiorina macOS Sierra. Na dia hita amin'ny Internet aza izany dia tsara kokoa ny maka azy amin'ny alàlan'ny fampidinana azy amin'ny Mac tohanana.
Kitay USB 8GB farafahakeliny.
Ny macOS Sierra Patch Tool, azo alaina avy eto.
Ny fitaovana AUSEnabler, azo alaina avy amin'ny eto.
Zavatra tokony ho ao an-tsaina
Tokony hotadidintsika fa izay hapetrantsika amin'ny Mac tsy tohanana dia karazana Hackintosh, izany hoe mametraka Mac amin'ny solosaina izay tsy tokony hahafahantsika mametraka azy io, na dia Mac aza izany. Midika izany fa mety hahita olana sasany toa ity manaraka ity isika:
Mety misy Olana Wi-Fi. Ny Macs miaraka amin'ny modely Wi-Fi Broadcom BCM4321 dia tsy hiasa amin'ny macOS Sierra raha tsy ovaina ny karatra Wi-Fi. Ny solosaina tratran'ity olana ity dia ny sasany MacPro3,1; MacBook5,2; MacBookPro4,1; iMac8,1; Macmini3,1 sy MacBookAir2,1.
El Ny MacBook5,2 trackpad dia tsy tohanana. Izy io dia mandeha, fa mahita azy ho totozy ary tsy misy ny toerana misy ny Trackpad.
El Manana olana ny audio iMac 8,1 izay tsy miova ny habetsany na dia milaza aza fa miova izy. Ny audio mandeha, fa mandeha hatrany amin'ny farany ambony indrindra. Vahaolana iray dia ny fametrahana mpandahateny sasany mifandray amin'ny fivoahan'ny telefaona ary mifehy ny volony avy amin'izy ireo.
Efa fantatsika izany tsy ho afaka hanavao ny Mac App Store izahay. Tamin'ny septambra dia nanome lanja roa azo atao izahay: 1) ny fanavaozana dia apetraka tsy misy olana; 2) tsy miseho ary / na tsy apetraka ny fanavaozana; Mba hamahana izany dia mila mampiasa AUSEnabler isika.
Mba hanomezana hevitra anao dia apetrako amin'ny iMac hatramin'ny fiandohan'ny taona 2009 ary ny olana tokana sendra ahy hatreto dia indraindray (vitsivitsy) tsy maintsy ampifandraisiko tanana ny Wi-Fi rehefa manomboka na mifoha fitsaharana. Mikasika ireo fanavaozana dia nanavao ahy ny iTunes, noho izany efa fantatray izany Havaozina ny rindrambaiko Apple tsy misy olana.
Tsotra be ny fizotrany. Ilaina fotsiny ny manaraka ireto dingana ireto:
Apetrakay ao amin'ny Mac ny USB izay hamoronana USB Bootable.
Manokatra disility Utility izahay.
Misafidy ny fakan'ny USB isika, kitiho ny "Delete" ary misafidy ny zava-drehetra toy ity pikantsary manaraka ity (azontsika atao ny mametraka izay anarana tadiavintsika):
anarana: izay tiantsika rehetra.
endrika: Mac OS X Plus (Journaled).
tetika: Sarintany fizarana GUID.
Mba hamolavolana endrika dia tsindrio eo amin'ny «Delete».
Amin'ny USB efa noforonina, manokatra macOS Sierra Patcher izahay.
Tsindrio ny "Tsindrio tsindrio hijerena ..." ary safidio ny installer macOS Sierra.
Ao amin'ny "Volume" dia mifidy ny kapila USB isika.
Tsindrio ny "Start Operation ..." ary miandry azy ho vita.
Amin'ny alàlan'ny USB efa noforonina dia tsy maintsy manomboka aminy isika izao. Mba hanaovana izany dia averintsika indray ary tazomina ny bokotra ALT mandra-pahitantsika ireo singa misy.
Avy amin'ireo kapoka hitantsika, dia mifidy ny USB Bootable isika izay hanana ny anarana hoe "OS X Base System".
Ny fametrahana dia toy ny hafa rehetra: raha te-hametraka amin'ny 0 isika, mankanesa any amin'ny tabilao "Utilities", safidio ny Disk Utility ary hamafana ny kapila mafy rehetra. Avy eo dia manomboka ny fametrahana macOS Sierra izahay ary miandry ny famaranana ny fizotrany.
Raha vantany vao tafapetraka dia miverina mandeha ho azy. Eto isika dia hanana olana, ary izany dia ny tsy ahafahany manomboka ny rafitra fandidiana. Amin'izay fotoana izay dia tsy maintsy mamono ny Mac amin'ny bokotra fidiovana isika.
Mamerina ny solosaina indray izahay ary manindry ny bokotra ALT indray hanombohana amin'ny USB.
Mandeha amin'ny Utilities izahay izao ary misafidy "macOS Post Install".
Ho hitantsika eto fa manana menio milatsaka isika. Eo amboniny dia manana izay solosaina hitany isika. Mampiseho ny menio izahay ary misafidy karazana Mac mitovy hitantsika etsy ambony, raha ho ahy iMac9,1.
Eto dia tsara ny hametrahana ny toerana misy anao voamarina, fa azontsika atao ihany koa ny misafidy ny hametaka ny fizarazarana fanarenana (tsy manoro izany aho satria tsy mety amiko io), ny sensor sensor manodidina ary ny adaptatera Ethernet. Raha tsy manana an'izany ianao, dia ny boaty voalohany sy fahatelo ihany no havelako.
Avy eo, mifidy ny habetsahana hametrahana ireo patch isika. Ny habeny dia ny kapila mafy izay nametrahantsika macOS Sierra.
Ary farany, tsindrio ny "Patch" ary miandry.
Rehefa manomboka indray ianao dia tsy maintsy manaraka ireo dingana fotsiny handefasana ny fametrahana vaovao.
Raha tianao dia azonao atao ny mijery ny fomba fametrahana macOS Sierra amin'ny Mac tsy tohanana ao amin'ity horonan-tsary manaraka ity.
Ary ahoana no fanavaozana ny macOS Sierra amin'ny Mac tsy tohanan'ny tenako?
Eny, ny zavatra voalohany tokony ho fantatrao dia ny tsy ahafahanao raha tsy mahazo ny sarin'ny kinova maoderina kokoa ianao ary manatanteraka ny fizotrany manontolo amin'ny rangotra, izay hanala ny angona rehetra, na mampiasa kinova izay hapetraka amin'ny mpizara antoko fahatelo. Raha te hampiasa ny faharoa amin'ny safidy teo aloha ianao dia mila manampy dingana vitsivitsy fotsiny amin'ny dingana teo aloha:
Manokatra AUSEnabler izahay.
Tsindrio eo amin'ny «Catalogs Switch». Izany dia tsy hitady fanavaozana intsony amin'ny lohamilin'i Apple, raha tsy amin'ny iray tsy ofisialy. Raha mandroso ianao dia samy tompon'andraikitra amin'ny asany avy.
Ary efa azontsika izany. Ary farany, tsindrio ny «OK». Ankehitriny dia tsy maintsy miandry ny fampidinana ny kinova vaovao amin'ny mpizara isika, izay mety maharitra ora vitsivitsy na andro vitsivitsy.
Nahavita nametraka macOS Sierra tamina Mac tsy tohanana ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Ahoana ny fametrahana macOS Sierra amin'ny Mac tsy manohana
Jhonatan dia hoy izy:
ary ny mifanohitra amin'izany?, Mametraka Mac OS X Mavercisk amin'ny MacBook Pro Retina 2015?
Valiny tamin'i Jhonatan
Juan Carlos L dia hoy izy:
Tsy nahomby aho, manomboka ny paoma amin'ny paoma izy avy eo ary manome lesoka ahy raha afaka manampy ahy ianao manandrana azy amin'ny macbook 2007 Misaotra
Valiny tamin'i Juan Carlos L
Saingy ara-dalàna izany? Satria izany dia mametraka OS maimaimpoana ary mijanona tsy manasarotra ny fiainanao ianao satria manao izany ara-dalàna tokoa, tsy heveriko fa hiteny aho hoe mijanona miaraka amin'ilay kinova na Yosimite na Capitan
Mamaly an'i dwlinuxero
Carlos Zapata dia hoy izy:
Ah vonona aho hametraka OS maimaim-poana ka ara-dalàna ny zava-drehetra ary avy eo apetrako ny kinova farany amin'ny kaody x (misy ihany amin'ny kinova 10.12 amin'izao fotoana izao) hanaovana app ho an'ny iOS ary avy eo miaraka amina "OS" maimaimpoana izay vokariko. ilay voamarina avy amin'ny iTunes. öoooohhh naninona aho no tsy nitafy taloha ...
Valiny tamin'i Carlos Zapata
Yiye dia hoy izy:
Dwlinuxero, inona no ataonao? Tena ara-dalàna amin'ny fiainana, misy foana ny nerd izay mieritreritra fa marina kokoa noho ny hafa izy ary avy eo dia hita fa demonia tanteraka izy, miaraka amin'ity forum ity dia efa mitady handingana ny fitsipiky ny computing ianao, tsy fantatro izay manao eto ianao, mankanesa any amin'ny masonao moka maty ... fa azo antoka fa mijoko ianao ... tsy manelingelina anao amin'ilay ara-dalàna io.
Valio i Yiye
JBartu dia hoy izy:
Manana fanontaniana aho, hijerena raha afaka manazava ianao.
Nametraka ny kinova Sierra voalohany tamin'ny fararano aho rehefa nivoaka io safidy io tamin'ny MBP voalohan'ny taona 2009. Betsaka ny kinova taty aoriana, saingy mbola tsy nandiso ny fanavaozana ny fanavaozana ny rafitra mihitsy aho. Roa herinandro lasa izay, nanavao ny 0 hatramin'ny 10.12.4 aho, ankehitriny ny 10.12.5 dia miseho ao amin'ny Store ...?
Raha azoko tsara ny lahatsoratra dia tsy tokony hodinganiko io fa ny iTunes malefaka sy ny hafa ihany, ka izao no fanontaniako:
Azoko atao ve ny "manavao" avy amin'ny magazay sa tokony hanao fomba mitovy amin'izany hametrahana amin'ny 0?
Mamaly an'i JBartu
Pablo… ry ilay sipa, efa novaliako. Satria hitako fa tsy eo amin'ity tranonkala ity intsony ianao ary tsy miraharaha ireo webmaster an'ity.
Azoko atao ny manavao ny fanavaozana ny Store hatramin'ny 10.12.5 ao amin'ny MBP voalohandohan'ny taona 2009, rehefa avy nametraka ny kinova 0 avy amin'ny 10.12.4 miaraka amin'ny fomba tsy fanohanana aho ary nandiso ny fanavaozana ny Store hatramin'ny .5.
Ny valiny dia nahafa-po. Raha misy manontany azy.
Javier Guinot dia hoy izy:
Fantatro fa amin'ny Mac Pro 2.1 (2007) dia tsy azo atao ny manavao ny Sierra, satria CPU tsy tohanana izy io, satria mila an'i Penryn i Sierra. Izany tokoa ve? Misaotra
Valiny tamin'i Javier Guinot
Mikersson dia hoy izy:
Manana MacBook aho (13-inch, Aluminium, tara 2008)
Mandroso amin'ny dingana faha-7 amin'ny fizotry ny fametrahana aho:
«7.-Amin'ireo singa hitantsika, dia mifidy ny USB Bootable isika izay hanana ny anarana hoe" OS X Base System ".»
Omeko tohiny io ary asehony ahy ilay marika NULL.
Tsy hita ny kapilaiko na ny zavatra hafa ..
Na eo aza izany dia namerina nametraka "El Capitan" indroa aho ary tsy manome olana amiko izany.
Raha vantany vao navaozina ho Sierra aho dia milamina ny zava-drehetra .. rehefa miverina indray dia tsy voamarika ireo kapila mangidy .. hiala aho?
Valiny tamin'i Mikersson
Mauricio Castro dia hoy izy:
Navasako ny fahatsiarovan-tena ary rehefa manomboka amin'ny alt aho hanombohana avy amin'ny fahatsiarovako dia tsy hitany ilay fahatsiarovana
Mamaly an'i Castro mauricio
Ry vahoaka, tsy avelan'i OS Patcher hifidy OS Sierra aho! Inona no fanitarana tokony ho?
Miguel Barreda sary placeholder sary dia hoy izy:
Misy mahalala ve raha i Sierra dia azo apetraka amin'ny MacPro 1.1 "novaina" (izany hoe misy ny firmware nanova) ho 2.1?
Valiny tamin'i Miguel Barreda
Efren garcia dia hoy izy:
Miala tsiny fa nametraka High sierra aho hanaraka ireto dingana ireto ao amin'ny iMac 9.1 (2009 teo aloha - 20 ″) fa manana olana aho fa tsy mandeha ny USB, tsy haiko raha misy afaka manampy ahy amin'ity olana ity.
Valiny tamin'i Efren Garcia
Salama, misy fomba fiverenana mankany amin'ny Kapiteny ve? Nametraka ny sierra avo aho dia mandeha tsara fa rehefa sendra olana ram, misy mahalala miverina ve?
domayto dia hoy izy:
Salama, manana imac8.1 manana rafitra 10.6.8 aho
Azonao atao ve ny manatsara ity rafitra dinôzôro ity ho lasa avo kokoa, 10.10 farafaharatsiny ??
Misy mahalala ve mahavita an'io?
Nilaza tamiko koa izy ireo fa azonao atao ny manova ny kapila anatiny ho an'ny fampisehoana tsaratsara kokoa.
Mamaly an'i domayto
Ahoana ny fanamboarana ny lesoka "fakan-tsary tsy mifandray" amin'ny Mac
Hita any Japon izao ny fampahalalana momba ny fitateram-bahoaka